Kay: Ma ay jirto cid aan raali galinayo - BBC Somali
Kay: Ma ay jirto cid aan raali galinayo
21 Nofembar 2014
Shirkii heerka sare ee iskaashiga Soomaaliya iyo bulshada caalamka oo ay martigalisay Denmark, ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Copenhagen.
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa BBC-da u sheegay in ay tahay hay'adaha dowladda Soomaaliya ee sida barlamaanka, madaxtooyada iyo xafiiska Ra'iisul Wasaraaha ay tahay in ay raadiyaan xalka ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dowladda.
Nicholas Kay ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin sabab uu raaligelin uga bixiyo eedeyn uu dhowaan u jeediyey xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo uu ku sheegay in qaar ka mid ah ay codkooda siisanayaan lacag.
Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka codsaday danjire Kay in uu arrintaas raaligelin ka bixiyo.
Maqal Soomaalida Mareykanka oo wadda ol-ole ka dhan ah musaafurinta
Soomaalida Mareykanka oo wadda ol-ole ka dhan ah musaafurinta